कार्मेन पोसाडास: उनी को हुन् र हामी कुन पुस्तकहरू पढ्न सिफारिस गर्छौं? वर्तमान साहित्य
त्यहाँ यस्ता अवसरहरू छन् जहाँ केहि स्पेनिश लेखकहरू उत्कृष्ट छन् र उनीहरू बसोबास गरेको देशमा उनीहरूको पहिचान प्राप्त गर्दछन्। यस्तो घटना स्पेनमा राष्ट्रियतामा रहेको उरुग्वेकी लेखिका कार्मेन पोसाडासको हो, जहाँ उनको निवास छ र साहित्यिक संसारको सबैभन्दा चिरपरिचित।
तर, कार्मेन पोसाडस को हो? तपाईले कुन पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ? अर्को, हामी तपाईंलाई यस लेखकको बारेमा भन्न चाहन्छौं र तपाईंसँग उनको केही पुस्तकहरू छलफल गर्न चाहन्छौं। तपाईं निश्चित रूप तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ।
1 जो कार्मेन पोसाडास हो
2 कार्मेन पोसाडास द्वारा पुस्तक
2.1 भगवान उत्तर वायु
2.2 सपना र अन्य कथाहरूको व्यापारी
2.3 सानो infamies
2.4 आज क्याभियार, भोलि सार्डिनहरू
2.5 तीर्थयात्रीको कथा
2.6 रेबेका सिन्ड्रोम
जो कार्मेन पोसाडास हो
Carmen de Posadas Mañé, उनको सहि पहचान, ऊ उरुग्वेको मोन्टेभिडियोमा जन्मेको थियो। उनले अगस्त १ 1953 12 मा गरे तर वास्तवमा स्पेनमा बस्छन् जहाँ उनी बस्ने छन। उनका बुबा कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो जबकि उहाँकी आमा बहाली थी। आफ्नो बुबाको कामका कारण, सम्पूर्ण परिवार उरुग्वेबाट अर्जेन्टिना, स्पेन, इ England्ल्यान्ड, रूस… १२ बर्षको उमेरमा बसाई सरे। उनी चार भाइबहिनी, girls केटी र एक केटाहरूमा जेठी हुन्।
उनको साहित्यिक जीवन १ 1980 in० मा शुरू भयो, जब उनले बालबालिका र युवा साहित्य लेखे।, दुई विधाहरू जुन वर्तमानमा कार्मेन पोसाडाससँग यति धेरै पहिचान गर्दैनन्, किनभने उनका उपन्यासहरू कतै गएका छन्। यद्यपि उनी यी पुस्तकहरूका लागि चिनिए। वास्तवमा, १ 1984। XNUMX मा उनको पुस्तक एल सेओर भिएन्टो नोर्टेले साहित्यको राष्ट्रिय पुरस्कार जित्यो।
बच्चाहरूको पुस्तकहरू लेख्नुको साथसाथै उनले फिल्म र टेलिभिजन लिपिहरू, व्यंग्यात्मक निबन्धहरू पनि लेखे, र विभिन्न विधामा अन्य लेखकहरूसँग मिलेर काम पनि गरे।
जब वर्षहरू बित्दै गयो, त्यस्तै कारमेन पोसाडासका पुस्तकहरूको संख्या पनि बढ्यो। र यो हो कि १ 1991 1995 १ मा उनले एउटा नयाँ निबन्ध प्रकाशित गरे, तपाईंलाई कसले देख्यो र तिमीलाई कसले देख्यो! १ 1997 1998 In मा, उपन्यास पाँच निलो उड्यो; १ XNUMX XNUMX in मा केहि पनि त्यस्तै देखिंदैन, छोटो कथाको संग्रह; वा १ XNUMX XNUMX Pe मा पेकियास इन्फ्यामियास जुनसँग उनले ग्रह पुरस्कार जीते।
१ 1999 XNUMX। लेखकका लागि भाग्यशाली वर्ष थियो किनकि दुई महिनाको दूरीमा उनले आफ्नो बुबा र श्रीमान् (मारियानो रुबियो) गुमाए।
बिस्तारै ऊ निको भयो र उसको कलम बढि वयस्क रजिस्टरमा परिवर्तन भयो। र तथ्य यो हो कि उनले प्रकाशित गर्न शुरू गरेका पुस्तकहरू अब बच्चा वा युवा श्रोताको लागि थिएन, तर वयस्कहरूको लागि। वास्तबमा, २००१ मा ला बेला ओतेरोसँग, उनले एक फिल्म रूपान्तरण पाए।
कारमेन पोसाडासले वयस्क उपन्यासहरूको विधामा आफूलाई बढी समर्पण गरिरहनु भएको तथ्यको बाबजुद पनि, उनीसँग सधै बच्चाहरूको कथाहरू लिन ठाउँ हुन्छ। अन्तिम पुस्तक माछाडोमा २०० from देखि मेरो पहिलो पुस्तक हो। यसका केही उपन्यासहरूको अन्तिम प्रकाशित २०२० बाट द लिजेन्ड अफ द पिलग्रीम हो।
साहित्यिक पुरस्कार को रूप मा, उहाँ आफ्नो क्रेडिट मा एक सानो संग्रह छ। हामी १ 1998 2008 in मा ग्रह पुरस्कार, २०० Mad मा समुदायको म्याड्रिडको संस्कृति पुरस्कार हाइलाइट गर्न सक्छौं; वा ब्राजियर पुरस्कार, २०१ French गोन्कोर्ट फ्रान्सेली ग्यास्ट्रोनिक उपन्यासको लागि।
कार्मेन पोसाडास द्वारा पुस्तक
तपाईसँग अर्को हरेकको बारे कुरा गर्ने कारमेन पोसाडसको पुस्तक लगभग अन्तहीन हुनेछ। यद्यपि उनले अरु लेखकहरु जत्तिको लेखेका छैनन्, उनीसँग आफ्नै लेखहरुका संग्रह छन्। विशेष रूपमा, र विकिपेडियाबाट जानकारीमा आधारित, उनले २ children's बालबालिकाका कथाहरू,eनिबन्धहरू, लेखक लुक्रेसिया कि--हेडिन्गरसँगको अन्तर्वार्ताको पुस्तक र १ nar कथा उपन्यास लेखेका छन्।
ती सबैमा, हामी निम्न हाइलाइट गर्दछौं:
भगवान उत्तर वायु
Un बच्चाहरूको पुस्तक children's बर्ष बाट जसमा कथा केहि जनावरहरूको बारेमा भनिएको छ कि मार्च महिना आइपुगेको देखेर डरलाग्दो मिस्टर उत्तर वायुको उपस्थितिदेखि डराउनुहोस्, किनकि ऊ उडाउन बन्द गर्दैन।
दुई बच्चाहरु, आर्टुरो र मारियाले यस मान्छेलाई बहन बन्द गर्न मनाउन कोशिस गर्नेछन् ताकि वसन्त आउन सकून्।
सपना र अन्य कथाहरूको व्यापारी
Alfaguara प्रकाशन घर द्वारा प्रकाशित (र अब यति सजीलो सजिलो छैन), तपाईं Carman Posadas द्वारा सपनाहरु र अन्य कथाहरू को व्यापारी छ। यो पुस्तक, जो बच्चाहरूमा केन्द्रित छन् उमेर 8-,, Ahmet को कथा बताउँछ, एक युवा विक्रेता जो एक व्यापारीलाई भेट्छ। यसले तपाईंलाई केहि जादुगरी ड्रप्स प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई शानदार संसारमा जान दिन्छ जहाँ तपाईं धनी र शक्तिशाली हुनुहुनेछ। तर ती सपनाहरु पनि एक डरलाग्दो खतरा लुकाउन।
सानो infamies ले एक कला कलेक्टर को गर्मी घर मा हामीलाई राख्छ। उसले मान्छेहरूको समूहसँगै बस्ने निर्णय गर्छ र घण्टा रमाइलो तरिकाले हिंड्छ। जबसम्म चीजहरू गलत हुँदैनन् र सम्बन्धहरू विषाक्त हुँदैनन्, डबल अर्थ र "शरारती" टिप्पणीहरूको साथ वाक्यांशहरू देखा पर्न थाल्छन्।
आज क्याभियार, भोलि सार्डिनहरू
हामी लेखकको यो पुस्तक हाइलाइट गर्दछौं किनकि यो उनको भाइ, गेर्भासियो पोसाडसको सहयोग थियो। पुस्तक गणना हुनेछ पोसाडस परिवारको बिभिन्न गन्तव्यहरू मार्फत रोमांचक जुन उनीहरूका पिताको व्यवसायले गर्दा हो। यसमा, लेखकहरूले कूटटेल, खाजा, डिनर, आदि संग, कूटनीतिज्ञ को जीवन कस्तो छ प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गरेका छन्। साथसाथै "उनीहरूको साधनभन्दा बाहिर" बस्नु र एउटा छवि बहाना गर्ने कोशिस गर्नु जुन उनीहरूसँग वास्तवमै थिएन।
यो पुस्तक कार्मेन पोसाडासद्वारा मितिमा प्रकाशित अन्तिम पटक हो। र उहाँमा, तपाईं शीर्षकबाट के सोच्न सक्नुहुन्छ भन्ने भन्दा टाढा, यो ला Peregrina भनिने एक गहना को कथा संग सौदा गर्छ। यो एक मोती हो, सबै समयको सबैभन्दा प्रसिद्ध। सुरुमा यो क्यारिबियन समुद्रीमा फेला पर्‍यो र फिलिप दोस्रोलाई हस्तान्तरण गरियो। यसले यसलाई विभिन्न रानीहरूको सम्पदाको रूपमा छोड्दै आएको थियो, स्वतन्त्रता संग्रामको साथ, यो फ्रान्समा आइपुगेको थियो। त्यहाँ रिचर्ड बुर्टन आफैले एलिजाबेथ टेलरलाई दिए।
यो पुस्तक, बुद्धिमता र एक अजीब हास्य संग लेखिएको, एक को रूप मा सेवा खोज्छ प्रेम भूतहरू सम्बोधन गर्न गाईड गर्नुहोस्, किनकि यसले पुस्तकको कभरमा भन्छ। र यो के यो प्रयास गर्दछ कि भूतपूर्व प्रेम को छाया पत्ता लगाउन सिकाउन को लागी अपराधी हुन सक्छ कि तपाईं आफ्नो नयाँ प्रेम अघिल्लो एक तुलना, वा कि तपाइँ एक अर्को भन्दा राम्रो छ कि लाग्छ।
निस्सन्देह, यो तिनीहरूलाई तपाईंको जीवनको अंश बन्न कान्ज्योर गर्न खोज्दैन, तर तिनीहरूलाई अन्त्य गर्न र पृष्ठहरू एक पटक र सबैको लागि बदल्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » कार्मेन पोसाडास
कार्मेन पेलाइज भन्यो
नमस्ते, म Sira पुस्तक पढ्दै छु, र म केहि व्यस्त छु। केही दिन अघि मैले फेरि श्रृंखला "एन्ट्रे कस्टुरस" देखेँ र मलाई लाग्छ कि मलाई याद छ कि रामिरो अरिबासको मृत्यु भयो, र "सीडा" पुस्तकमा उहाँ फेरि देखा पर्नुभयो। मा दोधारमा छु।
कार्मेन पेलाइजलाई जवाफ दिनुहोस्
अरासेली कोबोस रीना भन्यो
१ 1999 XNUMX। मा, उनका पहिलो पति र उनका दुई छोरीका बुबा, राफेल रुइज डेल कुएटो मरेनन्, तर उनको दोस्रो पति मारियानो रुबियो। शुभकामना।
Araceli Cobos Reina लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको टिप्पणी बुझ्दिन। क्षमा
पुस्तक दिन: पढ्नको लागि आवश्यक पुस्तकहरू